‘Zec violating electoral law’ – NewsDay Zimbabwe
Previous article We will give equal opportunities to all: FreeZim
Next article Govt, Sinosteel sign $1bn MoU
why refuse to divulge such crucial info.it is like going for a football match where only one party is made aware of the match officials and the venue.the mdc made a mistake of going into that gnu and accepting to go into the sham 2013.I hope they are note repeating the same mistake.
Comment…taneta nemahumbwe elections.
Zvemaballot paper hazvina kana dhiri izvi.what matters is how many votes did party A and B got after the counting.You cant be involved in everything because you are the biggest opposition party.Ko vanaKisnot Mukwazhi hatisi kumbovanzwavo wani vachitaura nezvazvo?
kana zvisina dhiri surely they wouldnt say it is a security matter.ballot rigging taramba this time.its better we stop those elections.
Comment…seka memo zvine dhiri, kana zvisina why the secrecy, chimbinye mbinye junta
Comment…seka memo zvine dhiri, kana zvisina why the secrecy, chimbinye mbinye junta, this tym havalume, chamisa apoo iyaa